Iniesta Oo Ka Hadlay Inuu Neymar Soo Laabanayo, Sida Uu Arko Hadii Uu Real Aado & Inay La Walwalayaan %
Andres Iniesta oo uwaramay Barnaamij-ka ‘El Larguero’ oo ka baxa Idaacad Maxali ah oo ku taaa wadanka Spain ayaa wuxuu ka hadlay mustaqbalka saaxibkiisii hore ee Neymar, kaasoo tan iyo mrkii uu PSG laga reebay Champions League shaki mugdi soo galay.
“Hadii si daacad ah u hadlo, mustaqbalka Neymar ma ahan mid aan hada ka fikirayo,” ayuu Iniesta yiri, inkastoo uu daboolka ka qaaday inuu la yaabi doono hadii uu dib ugu soo noqdo camaaliqada wadanka Spain ee Barcelona.
“Caadi ahaan, marka aan ka tagto meel, waa ay adag tahay inaad dib uugu soo laabto, xili ciyaareedkan hadii uu soo noqdo waan la yaabi doonaa, xitaa hadii uu meel meel kale aado, laakiin waan arki doonaa,” ayuu sii daba dhigay.
Hadii uu arko isagoo baxaya, islamarkaana Neymar ay hada ubadan tahay inuu ku biiro Real Madrid, oo uu Madaxweynaha ka yahay Florentino Perez, Kabtan Iniesta ayaa wuxuu cadeeyay in taasi aysan iyaga ahaan wax wal ah ku hayn.
“Hadii ay lasoo wareegaan isaga, Madrid waxay salka udhigan doontaa inay kamid tahay kuwa aduunka ugu wanaagsan,” ayuu raaciyay – Isagoona sii daba dhigay: “Hadii hadii aan nahay Barcelona, waxaan wali haysanaa ciyaaryahan aan kuwa ugu fiican u tix-gelino.
Iniesta iyo Neymar ayaa si wada jir ah uwada dheelay afar xili ciyaareedkan, laga soo bilaabo markii uu Neymar 2013 yimid Camp Nou illaa iyo 2017 oo uu baxay.
Waxay wada hanteen Labo jeer oo horyaal ah, saddex jeer oo koob ah, Champions League oo Hal jeer ah, Club World Cup oo hal heer ah, Labo jeer oo Spanish Super Cups iyo Hal heer oo tartanka weyn ee Yurub laga dheelo ee European Super Cup ah.
Hadii Real Ay CL Qaadayso, Bandhiga CR7 & Xidiga Reer Spain Ee Gerard Moreno Oo Fariin U Diray Griezmann